Fihenam-bidy Manamboatra karazana milina semi-mandeha ho azy | XiongYe
• Manampy ny rafitra Programmable Logic Controller (PLC) miorina amin'ny masinina mpamorona mahazatra, izay mandray ireo singa elektronika sy pnnejika mandroso, ary ny fiasa dia azo ovaina ho azy sy tanana. Io no fanombohana afovoany ary mety hanova ny fomba fanafanana arakaraka ny endrika vokatra.
• Mampidina ny fepetra ara-teknika ho an'ny mpandraharaha izany ary ny fibaikoana rehetra dia azo fehezin'ny PLC.
• Ny famahanana ny tsindrona fihinan-kanina marobe dia mitsitsy be ny fotoana fisakafoanana.
• Ny ora ho an'ny tsingerin'ny famahanana ara-nofo, ny fanafanana, ny fampangatsiahana ary ny fampidirana dia marina sy marim-pototra. Mamonjy fotoana, mampihena ny vidiny, manatsara ny tombony ara-toekarena ary mampivelatra ny kalitaon'ny vokatra.
• Izy io koa dia mampihena ny hamafin'ny asa sy ny fiasan'ny asa mba hahafahan'ny olona iray mampandeha masinina maro.
Haben'ny bobongolo lehibe indrindra
Faneriterena ny rivotra
Ny lanja napetraka
Ny milina famolavolana endrika EPS dia ampiasaina amin'ny famokarana boaty fonosana EPS, block ICF, sisin-dàlana beton, sakana lavaka, hourdis, fanariana sombin-javatra very, cornice haingon-trano, tabilao, tsanganana, fiarovan-doha, sns.
Ny masinina dia afaka samy hafa habe eps vokatra, boaty, fonosana, fitoeran-javatra, sns Efa mivarotra ny milina mihoatra ny 100 firenena, manana laza tsara. Ny mpanjifa rehetra dia toa ny endrika sy ny kalitao milamina.
Ny orinasanay dia manana tantara mihoatra ny 30 taona amin'ity sehatra ity, ny marika dia CHX, miorina amin'ny faritra avaratra izahay, Nanlv Industrial Zone, Xinji City, faritany Hebei, Sina. Atrikasa mihoatra ny 3000m2, mpiasa 200 mahery, injeniera 20. 10 manokana ho an'ny famolavolana sy fanatsarana ny milina vaovao. Faly tokoa raha afaka mitsidika ny orinasanay ianao rehefa manafaka. Ny fanantenana dia manana fiaraha-miasa maharitra amin'ny orinasanao.
Previous: Masinina fanapahana mandeha ho azy feno
Manaraka: Masinina miova endrika PSZ Series